Puntland Voice – Page 1028 – Codka Dalka iyo Dadka
Shirkii diaspora UK oo soo gabagaboobey qodobana kasoo baxeen
Allburtinle(UK): Waxaa maalinimadii sabtida ee taariikhdu ahayd 12/06/2010 lagu soo gabagabeeyey shirwayne ay soo qaban qaabisay puntland diaspora fourm kasoo kusaabsanaa xogwaraysiyo iyo kala warqaadasho hawlihii qabsoomay sanadkii hore kuwa horyaala sanadkan aan kujirno. Waxaa kaloo shirkaas warbixin dheer ka […]
Hogaamiyaha Ururka Xisbul Islaam oo Maanta digniin u jeediyay Dalalka Deriska ah
Hogaamiyaha Ururka Xisbul islaam Sh.Xasan Daahir Aweys ayaa Maanta uga digay Dowladaha deriska la ah Soomaalia sida Kenya iyo Itoobiya inay fareglinta ka daayaan Soomaaliya. Waxaa uu xusay inay dagaalada sii wadi doonaan tan iyo inta ay fareglintaasi socoto,islamarkaana sida […]
Darawalkii qaaska u ahaa Madaxweyne Shariif oo u geeriyooday Hoobiyayaal hore loogu garaacay Garoonka diyaaradaha Muqdisho
Muqdisho (AB):-Warar uu dhawaan soo daabacay mid ka mid ah Wargeysyada Dunida ka soo baxa ayaa lagu sheegay in dhawaan Dalka Uganda lagu aasay Eriya Kabuye oo ahaa Darawalkii gaarka u ahaa Madaxweynaha Dowlada KMG Sheekh Shariif kaasoo u geeriyooday […]
Prof.Dalxa oo sheegay in heer gabo gabo ah ay mareyso dacwadii uu hor dhigay Maxkamada sare
Gudoomiye ku xigeenkii 1aad ee Baarlamaanka Dowlada KMG Prof.Maxamed Cumar Dalxa oo isagu wali aaminsan inuu yahay gudoomiye ku xigeenka sharciga ah ee Baarlamaanka ayaa daboolka ka qaaday in mar dhow uu go’aan kama danbeys ah ka soo bixi doono […]
Kulamadii shalay iyo Xalay Ciyaaraha Koobk Adduunka
Garoomada kala duwan ee Dalka Koonfur Afrika waxaa Maalintii 4aad si toos ah uga socda wareegyada hore ee tartanka Ciyaaraha Koobka Aduunka 2010 waxaana sida caadiga ahba la ciyaray ilaa sedex kulan. Sedexdii kulan ee shalay la ciyaaray waxa ugu […]
Wasiirka Caafimaadka Puntland oo socdaal ku tagay Degmada Burtinle ee Gobolka Nugaal
Burtinle (AB):-Wasiirka caafimaadka Dowlad Goboleedka Puntlamd Dr. Cali C/laahi Warsame iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaarey degmada burtinle ee Gobolka Nugaal. Wasiirka ayaa booqdey isbitaal gacanta lagu hayo dhismihiisa hada oo ay bilaabeen reer burtinle isagoo ah iskaa wax […]
Qarax iyo Isbuurasho sababay dhimasho iyo dhaawac oo Xalay ka dhacay Magaalada Nayroobi
Nayroobi (AB):-Wararka ka imaanaya Magaalada Nayroobi ee Dalak Kenya ayaa sheegaya in xalay uu halkaasi ka dhacay wax loo maleeyahay qarax xaafad ay dad Kirishtaan ahi ku sameyanayeen munaasabad iyaga u gaar ah. Wararka durbka ka soo baxaya meesha Mashaqadu […]
Shil khasaare badan gaystay oo Maanta ka dhacay Magaalada Buurhakaba
Buurhakaba (AB):-Baabuur nuuca Xamuulka qaada ah islamarkaana ku soo jeeday Magaalada Muqdisho ayaa maanta ku gadoomay Magaalada Buur hakaba ee Gobolka Bay. Inta laga war hayo shilkaasi gaari waxaa ku geeriyooday 3 qofood waxaana ku jirey dadka dhintay kirishboygii Baabuurka. […]
Beel Soomaaliyeed oo hub ku wareejisay Maamulka Islaamiga ah ee Gobolka Sh.hoose
Baraawe (AB):-Beesha Jiidde oo ka mid ah Beelaha Soomaaliyeed ayaa hub kala duwan waxaa ay ku wareejieen Maamulka Islaamiga ah eeGobolka Sh.hoose. Magaalada Baraawe ayaa lagu qabtay munaasabad Beeshaasi hub kala duwan ugu wareejisay Maamulka Islaamiga ah ee Gobolka Sh.hoose,waxaana […]
Dab khasaare Nafeed gaystay oo Maanta ka kacay Kaam qaxooti oo ku yaal Magaalada Boosaaso.
Boosaaso (AB):-Kaam lagu magacaabo Shabelle oo ku yaal Magaalo xeebeedka Boosaaso ayaa la soo sheegayaa inuu dab xooggan ka kacay kaasoo gaystay dhimasho iyo dhaawac intaba. Kaamka oo a dagn yihiin dad ka soo barakacay gobolada Soomaaliya ee dagaaladu ka […]
« Previous 1 … 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 … 1,044 Next »